वाईडवडीको भ्रष्टाचारमा संलग्नमाथि कारवाही गर्न माधव नेपालको माग - ३० फाल्गुन २०७६, NepalTimes
वाईडवडीको भ्रष्टाचारमा संलग्नमाथि कारवाही गर्न माधव नेपालको माग
३० फागुन, काठमाडौँ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले वाईडवडीमा भएको भ्रष्टाचारमा संलग्नमाथि विना पूर्वाग्रह कारवाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा पुर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भ्रष्टाचारका दोषीलाई पुर्वाग्रह नराखी कारवाही गर्न माग गरेका हुन् ।
उनले तारा गाउँ, वाईडवडी, न्यारोवडी लगायतमा आर्थिक अनियमितताका कयाँै प्रश्न उब्जिएकाले ती विषयमा सरकारले तत्काल अध्ययन अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताए । उनले भने “तारा गाउँ, वाइडवडी र न्यारोबडी सबैमा अनेक किसिमका प्रश्नहरु खडा भएका छन् । वाईडवडीमा त देखा देखी बद्मासी छ । त्यो भईसकेपछि त्यसलाई छानविन, अगाडि बढाउने , कारवाहीको विषय बनाउने । जो सुकै होस् छोड्ने कुरा आउँदैन । जो सुकै जुनसुकै क्षेत्रमा होस् । आग्रह पालेर गर्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन । पुर्वाग्रह पाल्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन । दोषीले सँजाय भोग्नुपर्छ । ”
उनले विकास निर्माण लगायतका आयोजनाहरु बनाउँदा दीर्घकालिन सोचका साथ कार्ययोजना बनाउन सुझाव दिए । छोटो समयमा नै असफल देखिने योजनाहरु बनाईएको भन्दै उनले संभावित आवश्यकता र प्रभावको आकलन गरेर योजना तर्जुमा गर्न आग्रह गरे । लुम्बिनी अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा बनाईएको एरोवृजको उदाहरण दिँदै त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमास्थलको जग्गा प्रयोग, बालुवाटारको प्रधामन्त्री निवास र मन्त्री क्वाटरका भवन निर्माणमा पनि दीर्घकालिन सोच राख्न नसकिएको बताए ।
उनले भने “कति आउछन् लुम्बिनीमा त्यो सबै सोचेर बनाए हुदैन ? त्यसको पार्ट वान अहिले लागु गरौ । पार्ट टु त्यसपछि लागु गरौ । पार्ट थ्रि त्यसपछि लागु गरौ । पार्ट वानमा एरोवृज छदै छैन । त्यस्तै उदाहरण हो यो काठमाण्डौ त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय एयरपोर्ट । एयरपोर्टको सिंगो जग्गा कति विस्तार गर्न सकिन्छ र के के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा परसम्मको सोच कहिलेही पनि भएन । हामी कहाँ सबै कुराहरुमा सोच छैन । पुल बनाउदा त्यस्तै छ । घर बनाउँदा पनि त्यस्तै छ । स्टडी रुम हुदैन । बालुवाटारमा जाँदाखेरी देखेँ । प्रधानमन्त्रीले पढ्ने कोठै छैन । कस्ता प्रधानमन्त्री तास खेलेर बस्ने हो कि जुवा खेलेर बस्ने हो ? पञ्चायत कालमा त त्यो भयो भयो बहुदलकालमा त त्यस्तो नहुनुपर्ने । यस्तो छ हाम्रो देशमा । मन्त्री क्वाटर त्यस्तै हो ।”
उनले टर्किस एयरलायन्सले काठमाण्डौँमा लिने हवाई इन्धनको मुल्य अत्यन्तै बढी भएकाले उडान नै स्थगित गर्ने संभावना रहेकाले त्यसबारे मन्त्रालयको ध्यानाआकर्षण गराए ।
USA 188,578 4,054 7,251
Australia 4,828 20 345
Japan 2,229 66 424
Pakistan 2,031 26 76
Thailand 1,651 10 342
India 1,397 35 124
Lebanon 470 12 37
Bulgaria 399 8 17
Kazakhstan 348224
Uzbekistan 17227
Nigeria 13528
Trinidad and Tobago 8741
China 81,518 3,305 76,052